मगरमहिला: चुनौती र बिकास – Rajyasatta.com
Reading Now मगरमहिला: चुनौती र बिकास
एक मगरमहिलालाई म एकदमै नजिकबाट बुझेकोछु । म सँग उनको यती मोटो पुस्तक नै छ भनेपनीहुन्छ । यसलाई म दिनरात अध्यन गर्नेगर्छु – कहिलेभान्सामा, कहिलेबिस्तारामा, कहिलेबैठककोठामा, कहिलेबारीमा त कहिलेबाटामा । योपुस्तकको नाम ‘कल्पनाको कथा’ हो भन्न रुचाउँछु । यसरी एक मगर महिलालाई मैले जती अरु कसले बुझेको छ होला र भन्ने पनि लाग्छ ।
ए.आई.जी.पि पार्वती थापामगर अर्कोनामचलेको महिलाहुनुहुन्छ। तर,अभाग्यबश महिलार त्यसैमा जनजातिकी भएकिले वाँहा आई.जिपी हुन नसकेकी एकपीडित महिला हुनुहुन्छ।राजनैतिक षड्यन्त्रले गर्दा वाँहा नेपालकै प्रथम महिला आई.जिपि हुन नसक्नुभएको तितो अनुभव हामीसबैलाई छ । मावोबादी द्वन्द्व बाट राजनीतिमा घुसेकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगर एकसफल राजनीतिकर्मी मगरमहिला हुनुहुन्छ । समाजसेवागरेर राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चाबटुलेकी इन्दिरारानामगर, जसले जेलमापरेका अभिभावकका छोराछोरीलाई हेरबिचारपुर्याउनेसंस्था सन्चालन गर्नुहुन्छ, अर्कोप्रचलितनामहो। वाँहाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरु पाउनुभएको छ । हालै बिबिसिको ‘बर्षमहिला’ मध्य सय नम्बर भित्रपर्नसफल हुनुभएकोछ ।
पुरुषले महिलाप्रती गर्ने असमान व्यबहारको बिषयलाई कोट्ट्याउँदैगर्दा राज्यले आ.ज.प्रति गर्दैआएको असमान व्यबहारसँग तुलनागरौं । राज्यमा एकलजातीको हालिमुहाली छ । आ.ज. ले राज्यसत्ता बाहिररहेर समाबेशीताको माग गरिरहेकाछन ।राज्यका डाडुपन्यु चलाऊनेहरु भन्छन- सक्षमछौ भने प्रतिस्प्रधामा आउ । जुन कुरोसत्यपनिहो । अर्को यथार्थ केपनि हो भने, राज्यले इतिहाँस देखीनै बिबेधपूर्ण निती अपनाएको छ । तर, यसरी पिछडाइएका समुदायलाई त्यतिबेलैदेखी ‘हामीलाई यसरी किन दबाइएकोछ ?’ भनेर चेतनाकिन आएन र मैत्रिपूर्ण प्रतिबाद किन गरिएन ? बिक्रम सम्बद २०५० को दसकमा आएरमात्रै किन मावोबादि जनआन्दोलनले यस बिषयलाई उठान गरिदिनपर्ने ?
पुरुषले महिलाप्रती गर्ने असमान व्यबहारको बिषयलाई कोट्ट्याउँदैगर्दा राज्यले आ.ज.प्रति गर्दै आएको असमान व्यबहार सँग तुलनागरौं । राज्यमा एकलजातीको हालिमुहाली छ । आ.ज. ले राज्यसत्ता बाहिर रहेर समाबेशीताको मागगरिरहेकाछन। राज्यका डाडुपन्यु चलाऊनेहरु भन्छन- सक्षमछौ भने प्रतिस्प्रधामाआउ । जुनकुरो सत्यपनिहो। अर्को यथार्थ केपनि होभने, राज्यलेइतिहाँस देखीनै बिबेधपूर्ण निती अपनाएको छ । तर , यसरी पिछडाइएका समुदायलाई त्यतिबेलै देखी ‘हामीलाई यसरी किनदबाइएकोछ ?’ भनेर चेतना किन आएन र मैत्रिपूर्ण प्रतिबाद किन गरिएन ? बिक्रमसम्बद २०५० को दसकमा आएर मात्रै किन मावोबादि जनआन्दोलनले यसबिषयलाई उठान गरिदिन पर्ने ?
तर , यसो हुननसक्नुका कारणहरु थुप्रै हुनसक्छन । धार्मिक, समाजिक, पारिवारिक कुराहरु र महिलास्वयमको शारिरिक सम्रचना इत्यादी यसका अड्चन्हरुहुन । ‘केगर्ने ! भगवानले दिएकोबरदानहो’ भन्दै कुनामा बसेर हुँदैन । यो जालोलाई तोडेर बाहिर निस्कन म मेरा महिलामित्रहरुलाई सुझाव दिनचाहन्छु ।